China Graphite i electrode Joint ifektri kanye nabaphakeli | Hexi
I-graphite electrode ngokuhlanganyela isesekeli se-graphite electrode, esetshenziswa kanye ne-graphite electrode. Uma isetshenziswa, idinga ukuxhumeka ngentambo yesikulufu yekhanda le-graphite electrode lesifazane.
I-graphite electrode ngokuhlanganyela idlala indima ebaluleke kakhulu ekwenziweni kwensimbi, okuthinta ngqo umsebenzi we-graphite electrode. Uma kungekho okuhlanganisiwe kwekhwalithi ephezulu, i-graphite electrode izophuka kalula futhi ivuleke kalula, okuholele ezingozini. Ngakho-ke, umbuso unemboni kazwelonke ejwayelekile yokuhlanganiswa kwe-graphite electrode, edinga ukuxhumeka okuhlanganisiwe, futhi izinga likazwelonke lichaza intambo ne-pitch, ukuhlanganiswa kwe-electrode kungowesilisa, futhi i-electrode iyaguquguquka Lapho usebenzisa i-graphite electrode, isikulufa owesilisa kowesifazane ikhanda le-graphite electrode uqobo.
Isithombe esijwayelekile sosayizi ohlanganisiwe we-graphite electrode simi kanje:
I-graphite electrode ne-graphite electrode ehlanganiswe yinkampani yakwaHexi inezidingo eziqinile zekhwalithi futhi ihambisana nezinga lomkhakha kazwelonke. Lapho u-80% wamanje ugeleza ungqimba olungaphandle impela lomqhubi ngenkathi kuqhutshwa umqhubi wamanje, ijoyini le-graphite electrode elikhiqizwe yinkampani yakwaHexi lizokwenza ama-electrite amabili ama-electrode ashelele ngaphandle komthungo.
Langaphambilini Graphite Iziko
Olandelayo: I-Power Graphite Electrode ejwayelekile